Mmepụta ọdịyo nke iQOO Pro 5G ga-abụ nnukwu ntụkwasị obi | Gam akporosis
Mmepụta ọdịyo nke iQOO Pro 5G ga-abụ nnukwu ntụkwasị obi
Kpọmkwem otu izu, Vivo ga-agbakwunye ọkọlọtọ ama ama ọhụụ maka akara ngosi nke iQOO. Ngwaọrụ a tụrụ anya ya bụ iQOO Pro 5G, ma ekwenyelarị na ị ga-abata na ụbọchị ahụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị tupu ịhapụ akara nke ụfọdụ atụmatụ na teknụzụ nkọwa na ọ ga-eze flaunt.
Anyị achọpụtaworị nke ahụ ọnụ ya ga-abụ ebe obibi nke Snapdragon 855 Plus, 7 nanometer mobile platform lekwasịrị anya na egwuregwu ndị nwere ike iru oge kachasị ọrụ nke 2.96 GHz. N'otu oge ahụ, anyị amatalarị ihe ọzọ na-echere anyị, anyị ga-ekwukwa banyere ihe a niile n'okpuru, mana karịa nkwado nke Hi-Fi ọdịyo nke gosipụtara na nso nso a dịka achịcha ọkụ site n'aka ndị nrụpụta China n'onwe ya.
Site na akaụntụ Weibo nke ụlọ ọrụ ya, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara, site na ọkwa ọkwa, na iQOO Pro 5G ga-abịa site na nkwado ọdịyo Hi-Fi, nke gosipụtara ya dị ka ọrụ "Cool Me Music".. Ọ na-enye ezigbo ụda dị mma, yabụ anyị na-atụ anya ezigbo nguzozi n'etiti bass, etiti na elu na ndị ọkà okwu nke ekwentị a.
Na ngosipụta ọhụụ ahụ ekwughị ihe ọhụụ ọzọ, mana anyị nwere ọtụtụ data n'okpuru amamịghe nke anaghị ahapụ anyị ohere dị ukwuu n'echiche, rue atụmatụ metụtara. Agbanyeghị, n'agbanyeghị anyị na-atụ anya imewe nke yiri nke mbụ smartphone iQOO, nke ejiri Snapdragon 855 mee ihe, anyị ekwenyeghi ozi ọ bụla metụtara nke a.
Dị ka aha ya pụtara, ngwaọrụ ga-enwe nkwado maka njikọta 5G. Na mgbakwunye, ọ ga-enwe ihuenyo 6.41 nke anụ ọhịa na FullHD + mkpebi nke 2,340 x 1,080 pikselụ (19.5: 9), batrị 4,410 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke 44 watts, igwefoto 12-megapixel na nhazi igwefoto atọ. nke 48 MP + 13 MP + 12 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mmepụta ọdịyo nke iQOO Pro 5G ga-abụ nnukwu ntụkwasị obi
Egwuregwu PlayGalaxy: Egwuregwu Samsung na-agbasa na ikpo okwu na Septemba
Nnukwu batrị 5000 mAh bụ ihe Realme 5 ga-enwe